ယောင်္ကျားတွေကို နားလည်ခြင်း – သူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးများနှင့် ဆိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်များ
အမျိုးသားတွေဟာ ရိုးရှင်းတဲ့သတ္တဝါတွေပဲ။ ဒီစကားက တစ်ချိန်လုံးမှားယွင်းနေခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေဟာ ထင်သလောက်မရိုးရှင်းတော့ပါဘူး။ မယုံနိုင်လောက်အောင် ရှုပ်ထွေးပြီး လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တယ်။ အလွန်လှပလွန်းတဲ့ ထူးခြားမှုတွေရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ အခြားအရာတွေရှိနေပါသေးတယ်။
သင့်မှာ အမျိုးသားစကားပြန်တစ်ယောက်လိုတယ်။ မင်္ဂလာပါ။ သင့်နဲ့အမျိုးသားကြားက သံတမန်လုပ်ပေးပါရစေ။ အမျိုးသားတွေရဲ့ ပြောတဲ့စကားလုံးတွေနှင့် ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ စာရင်းတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ရုပ်ဆိုးပါလိမ့်မယ်။ သည်းခံပါ။
ကိုယ်မင်းကို ချစ်တယ် = ဒီစကားလုံးက အမျိုးသားတွေပြောသမျှစကားထဲမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးစကားလုံးပါ။ သူဆိုလိုတာက ” မင်းလည်း ကိုယ့်ကို ချစ်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ မင်းမှာ ကိုယ့်အတွက် ခံစားချက်တွေကို ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကိုယ်သိတယ်။ ဒီစကားလုံးငါးလုံးနဲ့ လုံလောက်မယ်လို့ ထင်တယ်”
မင်းအရမ်းလှနေတယ် – အရမ်းလှလွန်းတဲ့ မင်းကို ဒီစကားလုံးတွေထက် ပိုကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေရှိနေသေးရင် ကိုယ်ပြောချင်တယ်။ ဒီစတိုင်လ်လေးကပဲ ကိုယ့်အတွက် အရာအားလုံးအဆင်ပြေစေတယ်။
ကိုယ်ပင်ပန်းတယ် – ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ့်ကို အားနည်းတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ ကိုယ်မင်းကို ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူး။ ကိုယ်ပြဿနာတွေကြားထဲမှာ ဘယ်သူ့ကို အကူအညီတောင်းရမှန်းမသိဘူး။
ဘာတစ်ခုမှ မပြောဘူး – ကိုယ်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ အမှန်တကယ်ပြောနိုင်မယ့် နေရာတစ်ခု၊ အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားပေးပါ။
ငါအခု အရမ်းခံစားနေရတယ် (အမျက်ဒေါသ (သို့) လေသံမြင့်မြင့်နဲ့ပြောနေတယ်ဆိုရင်) – ငါအဆင်မပြေဘူး။ ငါ့ခံစားချက်တွေကို မင်းမသိပါဘူး။ မင်းကို ပြောပြေနေမိတာကိုက ငါ့အားနည်းချက်၊ ငါ့အမှားဖြစ်နေတယ်။
ကိုယ်အခု စိတ်မကောင်းဘူး (စိတ်လှုပ်ရှားမှုမပါဘဲ ပုံမှန်အသံနဲ့ပြောရင်) – ကိုယ်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားလည်ဖို့အကူအညီလိုတယ်။ မင်းထင်တာတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ သို့ပေမယ့် မင်းကိုယ်ဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာ မင်းနားလည်ပေးဖို့ လိုတယ်။
မင်းဘာတွေ ဝတ်ထားတာလဲ? – ”ကိုယ်မင်းကို ချီးကျူးချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဝတ်စုံက မင်းရဲ့ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုလား သိပါရစေ။ နောက်တစ်စုံထပ်လဲဖို့ စိတ်ကူးမရှိတော့ဘူးလား?
မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ (ဖုန်း/ စာ) – ကိုယ်မင်းကို ခုချိန်မှာ တကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ မင်းအကြောင်းပဲ စဉ်းစားနေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မင်းနဲ့အတူရှိနေတယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်နိုင်အောင် ဖုန်းဆက်တာ (သို့) စာပို့လိုက်တာ။
မင်းဘာလုပ်နေတာလဲ (မြင်နေရဲ့နဲ့ မေး) – မင်းလုပ်နေတဲ့ အလုပ်က ဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ လုပ်နေတာလဲဆိုတာ ငါ့ကို ရှင်းပြပါဦး။
မင်းဘာလုပ်ချင်လဲ? – ကိုယ့်မှာတော့ အစီအစဉ်နည်းနည်းလောက်လုပ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းမကြိုက်မှာစိုးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခွင့်တောင်းနေတာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းအတွက်တော့ တောင်းပန်ပါတယ်။
မင်းရဲ့ သူငယ်ချင်း (သို့) မိသားစုကို ကိုယ်မကြိုက်ဘူး? – မင်းသူငယ်ချင်းတွေက မင်းကို ထိုက်သင့်သလောက် ကောင်းကောင်းမဆက်ဆံဘူးလို့ ထင်တယ်။ မင်းကို ကိုယ်ကာကွယ်ပေးမယ်။ (သို့) မင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ငါ့ကို မကြိုက်ကြဘူးထင်တယ်။